Dowlada Ardayda MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dowladda Ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay kulmaan sanadka oo dhan, oo ay ku jiraan xagaaga. Ardayda waxaa laga doortaa fasalada 9-12 ee Abriil sanadka soo socda. Waxaa jiri doona lix arday oo cusub, toddobo sophomores, sideed juniors, iyo toban waayeel, oo ay ku jiraan afar sarkaal oo sare. Waxaa jira laba la taliyeyaal ah oo ay caawiyaan hal maamule iyo agaasimaha howlaha. Ardaydu waxay wax ka bartaan hoggaaminta iyagoo horumarinaya xallintooda dhibaatada, qorshaynta iyo xirfadaha hadalka, waxayna ku lug leeyihiin barnaamijyada iyo go'aannada siyaasadeed ee saameeya dhammaan ardayda. Dhacdooyinka ugu waaweyn ee la qorsheeyay waxaa ka mid ah Soo-noqoshada guriga, Maalinta Halyeeyada, HeartWeek, iyo Prom.
Doorashooyinka Dowladda Ardayda
Sannad kasta, Abriil, waxaan qabannaa doorashooyin jagooyin ka ah dowladda ardayda sannadka soo socda. Dhamaan ardayda waxay u codeyn doonaan afar boos oo fulin ah: madaxweyne, madaxweyne ku xigeen, xoghaye, iyo qasnaji. Doorradan waxaa buuxiya ardayda waayeelka ah, iyadoo madaxweynaha looga baahan yahay inuu ugu yaraan hal sano oo hore uga shaqeeyay Dawladda Ardayda. Waxaa si aad ah loogu talinayaa in saddexda kale ee fulinta ay sidoo kale khibrad hore u leeyihiin wakiil ahaan, in kastoo aan loo baahnayn. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan doorashooyinka madaxweynaha iyo fulinta, mas'uuliyadaha, iyo shuruudaha u tartamaya ayaa lagu faahfaahiyay xiriirka hoose.
Fasal waliba wuxuu u codeyn doonaa wakiiladiisa shaqsiyeed: 6 waayeel, 8 yar yar, 7 fasal, iyo 6 ardayda cusub. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan doorashooyinka wakiillada, mas'uuliyadaha, iyo shuruudaha u tartamaya ayaa lagu faahfaahiyay xiriirka hoose.
Macluumaadka Doorashooyinka Dowladda Ardayda
Su'aalo kasta oo la xiriira doorashooyinka waxaa lagu hagaajin karaa Mrs. Ellis ama Mrs. Johnson .
Dowlada Ardayda MHS waxay diirada saareysaa sii wadida dhismaha bulshada dhexdeeda ardaydeena iyo shaqaalaheena. Waxaan rajeyneynaa inaan ku qabanno dhacdooyinka qaar deyrtaan xerada MHS, markaa hubi inaad si joogto ah dib u hubiso oo aad noo raacdid warbaahinta bulshada!
Dhacdooyinka hoos ku taxan waa kuwa ay Dowladda Ardaydu kafaala qaaday sannadihii la soo dhaafay. Waxaan ku rajo weynahay inaan sii wadno caadooyinkan sannadkan waxaanan ku faraxsanahay inaan hirgelinno fikrado cusub oo ku habboon tilmaamaha CDC, iyadoo weli la dhisayo bulshada oo lagu raaxeysto!
Imaatinka guriga waa munaasabad toddobaad socotaa oo ay martigeliso Dowladda Ardayda oo ay ku jiraan hawlo kala duwan. Dhowr maalmood oo dhar-soo-saar ah oo kala duwan ayaa la qabtaa toddobaadka oo dhan, taasoo horseedda "Maalinta Ruuxa" maalinta Jimcaha ee ciyaarta Hoyga. A pep-fest ayaa la qabtaa Jimcaha sidoo kale. Fasallada waa la gaabiyey oo Boqortooyada Waddanka ee Boqortooyada iyo Boqoradda ayaa loo caleemo saaray inta lagu guda jiro xilliyada loo yaqaan 'pep-fest' maadaama laga soo xulay maxkamadda Royalty-ee loo codeeyay ardayga. Ka dib markii loo yaqaan 'pep-fest', gaardis ayaa ka dhacaya Excelsior. Fiidka dambe, ardaydu waxay xaadiraan ciyaarta kubbadda cagta ee Soo-galootiga, waxayna ka qaybgalaan qoob-ka-ciyaarka rasmiga ah ee Imaatinka habeen dambe.
Kansarka La Dagaalanka waxa uu dhaca bisha Sebtember ama Oktoobar ee sannad kasta. Ardayda Ardaygu waxay lammaaneysaa Randy Shaver Cancer Research & Community Fund iyo Minnetonka Football si ay lacag ugu ururiyaan cilmi baarista kansarka. Lacagta ayaa la uruuriyaa inta lagu jiro usbuuca dugsiga iyo ciyaarta kubbadda cagta ee usbuucaas, iyo sidoo kale ciyaarta Soo-noqoshada. Dhammaan dakhliyada waxay si toos ah ugu socdaan Randy Shaver Cancer Research & Community Fund.
Maalinta Halyeeyada waa fursad ay bulshada MHS u dabaaldegaan oo ay ku sharfaan halyeeyadeenna maxalliga ah. Dowladda Ardaydu waxay abaabushaa halyeeyo ka socda aagga si ay ugu biiraan shaqaalaha iyo ardayda MHS xaflad ka dhacda dugsiga sare, oo ay ku jiraan Fannaaniinta Rugta, ardayda bugta, afhayeenka, iyo ilaaliyaha midabka Soo dhaweyn yar oo loo sameeyo halyeeyada iyo qoysaskooda ayaa xigi doonta.
Polar Plunge waa meel baraf ah oo u boodbooda harada Minnetonka ee xeebta Excelsior. Saxiix khadka tooska ah si aad u keydiso $ 5. Keen shukumaan, beddel dharka oo xiro dharka dabbaasha. Hubso inaad ku hubiso ardayga Minnetonka, macallinka, ardayda ka qalin-jabisay ama xubin ka tirsan bulshada foomka diiwaangelinta si aan ugu helno sumcad dhammaan dadka "Tonka Tough"! Xusuusnow, 10-kii qof ee boodaya, ALARC waxay ugu deeqi doontaa $ 100 Saaxiibbada Qoyska ee Minnetonka Toddobaadka Qoyska.
HeartWeek wuxuu dhacaa inta lagu jiro usbuuca oo ay ku jiraan Maalinta Jacaylka. Ujeedada HeartWeek waa in lacag loogu ururiyo Saaxiibada Qoyska ee aan macaash doonka ahayn, oo taageera qoysaska baahida dhaqaale ka qaba nidaamka Dugsiga Dadweynaha Minnetonka. Lacagtu waxay taageertaa waxyaabo ay ka mid yihiin ajuurada imtixaanka, cuntada ardayda iyo / ama qoysaska, biilka kululaynta, dareyska PE, iwm. iyo inbadan. Maalinta Jimcaha ee HeartWeek, ardaydu waxay ku deeqi karaan inay ka qaybgalaan nashaadaadyo kala duwan oo dugsiga oo dhan ah sida bandhigga 'Tonka's Got Talent', riwaayad, filim, dodball, kubbadda cagta, iyo nashaadaad kale oo xiiso leh Qoob ka ciyaarka HeartWeek waxaa la qabtaa habeenka Sabtida si loo dhameeyo usbuuca xiisaha iyo lacag uruurinta.
Prom dhaqan ahaan qaadataa meel Saturday labaad ee May. Dhammaan ardayda yaryar iyo kuwa sare waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan. Ardayda cusub iyo ardayda dhigata fasalka labaad ayaa laga yaabaa inay kaqeyb galaan qoob ka ciyaarka yar ama weyn. Tani waa qoob ka ciyaar rasmi ah oo taariikhi ah
Ardaydu waa inay dhageystaan ogeysiisyada maalinlaha ah ayna kala tashadaan shabakada MHS wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan dhacdo kasta markay soo dhowaato.
Foomka Codsiga Maaliyadeed (dhow dhow)